नेपालीकि छाेरी सियाेना बचाउनका लागि आमाबुवा आफ्नाे ज्यान दिन तयार ? सहयोगका लागि अपिल! – KhabarTime
नेपालीकि छाेरी सियाेना बचाउनका लागि आमाबुवा आफ्नाे ज्यान दिन तयार ? सहयोगका लागि अपिल!
काठमाडौं : बरिष्ठ बाल राेग बिशेषज्ञ डाक्टर सन्दिप श्रेष्ठ र उहाँकि श्रीमती नर्स एलिना गुरुङको तेह्र महिने छाेरी सियाेना श्रेष्ठ स्पाईनल मस्कुलर एट्राेफि राेग सँग लडिरहेकि छिन । सियाेनाको उपचारको लागि २५ कराेड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अस्पतालले बताएको छ । याे राेगको उपचार नेपालमा सम्भब नभएको हुनाले अमेरिकामा मात्रै यस राेगको उपचार हुने सियाेनाकि आमा एलिना गुरुङले बताएकि छिन । सियाेनाको लागि तत्काल २ बर्ष भित्रै पैसाको जाेहाे गर्नु पर्ने छ ।
सियाेनाको उपचारका लागि २५ कराेडको आवश्यकता भएकाले तत्काल सम्भब नभएका कारण सामाजिक अभियानबाट पैसा संङकलन सुरु भएको छ । सियाेनाको उपचारका लागि आर्थिक सहयाेग जुटाउदा सामाजिक संजाल प्रयाेग कर्ताहरुले नकारात्मक कुराहरु गरेको भन्दै सियाेनाकि आमा रुदै मिडियामा सार्वजनिक छिन । आफ्नाे छाेरिलाई बचाउन सहयाेगका लागि सबैलाई अपिल गरेकि छिन ।
समाजिक सञ्जालमा नकारात्मक कुराहरु आएका कारण सियाेनाका आमा बुवा निकै दुखि भएका छन । र छाेरिकै लागि सियाेनाका वुवा ले डाक्टरि को काम समेत छाडेको र आफुले पनि जागिर छाेडेर छाेरिको उपचार मा लागेकि बताएकि छिन । हाल सम्म देश तथा बिदेश बाट ७ कराेड १० लाख जम्मा भएको जानकारी आएको छ । याे छाेटाे समयम‌ै धेरै पैसा जम्मा भएको छ तर याे पैसा सियाेना को उपचार का लागि निकै नै कम हाे । त्यसैले सबैको सहयोग को अझै जरुरत छ । सियाेनालाई (SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SME-1) राेग लागेको छ ।
सियाेनालाई लागेको राेगको कारण – अंगहरुले काम नगर्ने, शरीर सुक्दै जाने जस्ता लक्षण देखिए । जस्का कारण अहिले मृत्यु जित्न संघर्ष गरिरहेकि सियाेनाको जीवन रक्षाका लागि कामना गर्दै सम्पुर्ण नेपालिहरु , सेलिब्रेटि हरुले पनि सहयाेग गरिरहेका छन् । त्यस्तै , सियाेना बचाउनका लागि धेरै कलाकार हरुले सहयाेग गरेका छन, र देश तथा बिदेशमा रहनु हुने धेरै सहयाेगी मनहरुले सहयाेग गरेका छन ।
सियाेना बचाउनका लागि जाजरकोटका युवाहरुले दिए एक लाख ३८ हजार त्यस्तै सहयाेगी मनहरु ईसा गुरुङ, ज्वाला सङग्राैला, पत्रकार रबि लामिछाने, हेम थापा, नायक आकाश श्रेष्ठ, नायिकाहरु नन्दिता केसि, पुजा शर्मा, केकि अधिकारी, बेनिसा हमाल, आना सर्मा, वर्षा राउत, एलिसा राई, डाक्टर तथा गायिका तिर्सला गुरुङ, अस्मी श्रेष्ठ, किर्केट खेलाडी सन्दिप लामिछाने लगायतका सेलिब्रेटिहरुले सियाेनाको लागि हेल्प पाेष्ट गरेकोमा सियाेनाका वुबा आमाले धन्यवाद दिएका छन । उनिहरुलाई आर्थिक सहयाेगमा अघि बढनको लागि सियाेनाका आमा बुवाले आग्रह गरेका छन ।
त्यस्तै १० महिने सियाेनाको जीवनरक्षाका लागि अष्ट्रेलियास्थित विनर सर्कल मिडियाबाट ५ लाख सहयाेग भएको छ । बडा दशैको नायक पल शाहले आफ्नाे फेसबुक , सामाजिक संजालमा जीवन मरणको बाजि खेलिरहेकि सियाेना श्रेष्ठको उपचारका लागि आर्थिक सहयाेग गरेका पनि बताएका छन ।
उनको सिघ्र स्वास्थ्यको कामना सहित पल शाह र उनको परिवारबाट दशै दक्षिणा स्वरूप १ लाख नगद हस्तान्तरण गरेका जानकारी गराएका छन । यसअघि अभिनेत्री वर्षा राउतले ३० हजार, गायक बुद्द लामाले १० हजार, हास्यकलाकार कुमार कट्टेलले १० हजार सहयाेग गरेका छन । यस्तै अभिनेत्री करिष्मा मानधरले पनि सहयाेग गरेकि बताएकि छिन । त्यस्तै मनकि धनी समाजसेबि ईसा गरुङ ले पनि सियाेना नानुको लागि नगद रु ५० हजार सहयाेग गरिकि छिन ।
सामाजिक संजालमा सियाेनाका आमा वुवाले लेखेका छन कि हामी हाम्रो छाेरीको ज्यान बचाउन आफ्नाे ज्यान पनि दिन तयार छाैँ । लाखाै, कराैडाै नेपाली सहयाेगी मनका धनिहरुलाई आफ्नाे छाेरीको उपचारको लागि हजुरहरुप्रति आग्रह गर्दछाै । मेराे छाेरीको उपचार २ बर्ष भित्रै गरिसक्नु पर्नेछ र जति चाडाे गर्याे त्यति नै राम्रो हुने बताएका छन ।
सियाेनालाई सहयाेग गर्न अनलाइन, बैंक एकाउन्ट र ए सेवा एकाउन्ट रहेको छ । जहाँ सहयाेगि मनका धनी ब्यत्तिहरु पठाउन सक्नेछन । रकम पठाउनको लागि नाम सियाेना श्रेष्ठ ( Siyona Shrestha ) नाममा बैंक अफ काठमाडौं ( Bank of Kathmandu )को परासी ब्राञ्च ( Parasi Branch) मा एकाउन्ट खाेलिएको छ । जस्को एकाउन्ट नम्बर 206500000031524 रहेको छ ।
यस्तै आर्थिक सहयाेग गर्नको लागि 9816457809 मा फाेन गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईहरुको सानाे सहयाेगले पनि सियाेना नानुको ज्यान बच्न सक्छ । सेवा नै धर्म हाे ।सके सहयाेग गराै नसकेमा एक शेयर गरि मनका धनीहरु सम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुहाेला ।
एक थुकि सुकि हजार थुकि नदि भने जस्तै तपाईहरुको सानाे- सानाे सहयाेगले पनि उस्को ज्यान बच्न सक्छ, यदि रकम जुटेमा नानीलाई बचाउन सक्ने डाक्टरको अनुमान छ ।
देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर Share गर्नुस भगवानकाे चमत्कार देख्नुहुनेछ